Ahoana ny fomba fifehezana ny kalitaon'ny orinasa | JIAWEI
Mihamaro hatrany ny mpanamboatra zavamaniry hita eny an-tsena. Noho izany, ny fepetra ilaina amin'ny kalitao dia takiana mba hijoroana amin'ireo mpanamboatra maro. Ankehitriny andao hampahafantatra momba ny fifehezana kalitaon'ny orinasa izahay:
Voalohany: akora akora voafantina: singa plastika
(1) Ireo fitaovana vaovao PE vaovao nafarana 80% + akora vita amin'ny kilasy voalohany 10% + fitaovana fipoahana fipoahana dia ny 10% dia ampiasaina amin'ny fanovana mivaingana mba hampitombo ny haingana, ny fahatsorana ary ny fisorohana ny fanoratana.
(2) Ny akora ilaina amin'ny vokatra PEVA no miantoka ny EVA50% sy ny PE50%, hahazoana antoka ny fahalemena sy ny simulation ny ravina ary ny haavony dia mihoatra ny 10% amin'ny vokatra ankapobeny eo amin'ny tsena mba hahazoana antoka ny fahatsapana.
(3) Ny takelaka azo antoka amin'ny tontolo iainana dia ampiasaina amin'ny fanaovana pirinty ny ravina, ary ny loko nafarana dia ampiasaina amin'ny loko mba hahazoana antoka tsara ny simulation miloko ary tsy misy fiovan'ny loko.
(4) A + C manamafy orina ny varotra manokana momba ny varotra vahiny dia ampiasaina amin'ny fonosana baoritra.
(5) Ny akora vita amin'ny hazo tena izy toy ny tsatoka hazo sy ny bao vy dia vita amin'ny hena vita amin'ny hena sy matevina, novidiana sy napetraka mialoha, maina maina mandritra ny 3-6 volana ary avy eo dia maina amin'ny hafanana antonony mandritra ny 7-10 andro. Rehefa vita ny vilany dia rovitra mandritra ny 5-7 andro mba hahazoana antoka fa tsy mikotrika, kankana, maina na hamandoana.
Faharoa: Fitaovana vaovao: Hatramin'izao, efa havaozina ny 70% amin'ireo fitaovana.
(6) Fitaovana roa vita pirinty ho an'ny roa tonta mba hamahana amin'ny fomba mahomby ny olan'ny vokatra sy ny tsy fitovian'ny loko.
(7) Ny tsindrona skoto be dia be ampiasaina amin'ny toeran'ny taolana sy ny ravina mba hahazoana antoka fa tsy esorina sy tapaka ireo hazo sy ravina.
(8) Nanome vola 500000 ny orinasa mba hametrahana fitaovana fitsaboana fandefasana gazy mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fizotry ny famokarana manontolo.
Fahatelo. Dingana famokarana:
(9) 80% amin'ireo mpiasa eo amin'ny lohany dia mihoatra ny telo taona no mpiasa. Ny fahaiza-manao sy ny matihanina ny mpiasa taloha dia manome antoka fa miantoka ny vokatra hatramin'ny niandohan'ny famokarana.
(10) Ny olana momba ny fambolena, maro ny mpanjifa no mihevitra fa tsy mety ny entana, satria ny zavamaniry dia tsy noforonina amin'ny alàlan'ny fahavitan'ny asa. Ny tena bao poleta tena sy ny vokatra vita amin'ny hazo hazo, dia mametraka ravina ao anaty hazo izahay rehefa avy mamboly vilany izay mitazona ny vokatra feno sy tsara tarehy. Tsy ilaina ny mpanjifa hanokatra indray ny ravina ravina, hialana amin'ny fitarainan'ny mpanjifa izay tsy tsara tarehy mandritra ny fizotry ny varotra.